Raadiyoo BBN tiin: – Wiirtuu Odeeffannoo Muslimtoota Oromiyaa
ODUU BAAY’EE GADDISIISAA FI AJAA’IBSIISAA DHAGAHAA WOL DHAGEEYSISAA
Naannoo Oromiyaa Godina Harargee Bahaa Aana Kombolchaa Ganda ykn Araddaa Jignaa keeysatti Ustaaza guddaa Darasoota 300 ol barsiisu’uun beekaman irratti murteen hidhaa woggaa Tokkoo fi baatii 2 irratti murteeyfame.
Aanaa Komboolchaa Araddaa Jignaa keeysatti Sh. Abdallaa Aadam Muhammad darasoota isaanii 300 wojjiin guyyaa 15 dura Ayyaana Mowlidaa ganda irratti kabajamu irratti humnaan nyaata Mowlidaaf qophaahe isin nyaachifna jechu’uun I/ Gaafatamaan Gandaa Obboo Muhammad Ismaa’il Abboo fi akkasumas I/Aanaa Araddaa kan tahan Ahmad Muhammad Yahyaa humnoottan Mootumaa wojjiin Ta’uun Sh/ Abdallaa Aadamii fi darasoota 7 irratti tumaansa hamaa irraan gayuu isaanii maddeen oduu achi irraa nuuf gabaasaniiru.
Sh/ Abdallaa Aadamii fi darasoota 7 gama mana hidhaa Aanaatti eegi dabarsaniin booda ,mana hidhaa keeysatti dhiibbaa fi tumaansaan miidhaa akka malee irra geessaa kan turan yoo ta’u nyaata isaaniif hawaasn fide hundaa akka sariiniif kennaa turan maddeen keenya wol qabsiisanii nuuf gabaasaniiru .
Dhaddacha guyyaa Kamisaa Magaalaa Kombolchaatti ooleen Darasoota 7 dhiheessanii qarshii wabii 1500 kafalchiisuudhaan kan gadi lakkifamanii fi Sh / Abdallaa irratti Ragoottan sobaa Abaayii 3 dhiheeysuudhaan himannaa Sheeka suufiyyaa Sh / Musxafaa manatti qaluuf deemtee jirta jedhanii wonjalaa kijibaa qaanyii hin qabne itti bananii Adabbii murtee wogaaa 1 fi baatii 2 irratti murteeysuudhaan gama mana hidhaa Harariitti akka dabarfaman maddeen keenya nuf gabaasaniiru.
Ragoottan abaayii sadiin mana murtii dhihaatan ragaa isaan kennan jechootiin isaan sadeeniituu akka wol dhabu beekameera.
Ragaan kijibaa tokkoffaan, “Sh / Abdallaa Aadam Shek Usmaan qaluuf mana isaa dhaqee…” jedhe.
Ragaan kijibaa Lammaffaan, “Sh / Abdallaa Aadam Shek Musxafaa qaluuf mana isaa dhaqee…” jedhe.
Ragaan Sadaaffaan,” Sh / Abdallaa Aadam sh/ Musxafa’aan Darasaa kee narraa dhoorki jechuuf mana isaa dhaqee…” kan jedhan akka tahe maddoonni gabaasaniiru.
Akka maddeen keenya nuuf gabaasanitti Manni murtii Araddaa Jignaa Mowlida hin deemu jechuuf mirga qaba jedhee sheekaaf murteeysus I/ Gaafatamaan Ganda Jignaa Obboo Muhammad Ismaa’il Abboo milishoota isaa wojjiin tahuudhaan hawaasa irraa Masjiida ijaara jedhee qarshii 30,000 guuree eegi saaameen booda Abbaa seeraa gandaatiif Matta’a/waan sabbataa Qarshii kenneefii “sheekuma kana Magaalaa tana keeysaa nurraa baasaa, sagalee isaa asii dhabama taasisaa!” jedhee Mallaqa haga barbaadamu hundaa baasee himannaa kijibaa kana irratti banuu wojjiin gara magaalaa Kombolchaatti akka dabarsan goosisuu isaa wol qabsiisanii nuuf gabaasaniiru.
Kanumaan wol qabatee, Darasoota Sh / Abdallaa Aadam irrattillee dhiibbaan guddaan araddaa keessatti ittatti dalagamaa akka jiruu fi Milishootiin gandaa darasootaan ganda kana gaddhiisaa bahaa jechuudhaan goola’aa jiraachuu fi ittii gaafatamaan Araddaa Obboo Muhammead Ismaa’il Abboo haala kanaa fi kana fakkaatuu irratti seera haarawa akka baases beekameera .
Obboo Muhammad Ismaa’il Abboo I/ gaafatamaa gandaa kan tahe hawaasa wolitti waamee “ ana akka bulchiinsa gandaatti na ilaaluu hin qaabdan,… akka muumicha Ministeraa Haylemaaryamitti na ilaaluu qabdan,… ganda kana keeysatti mirga guutuu qaba,… kan barbaade nan ajjeesa, kan barbaade nan hidha,…” jechuudhaan uf dhaaduu fi uf dhubussaa gudda’aan darasoota irratti sodaachisaa shoroorkessaa ta’e oofaa jira.
Akka maddeen nuuf gabaasanitti nama darasaa tokkoof nyaata kenne yakkaa Qarshii 150 fi kan mana kenneefii qubsiise ammoo yakkaa Qarshii 500 akka adabamu seera haarawa tumachuu isaanii ifatti saaxilamee jira.
Darasoota Sh/ Abdallaa Aadam kan tahan 7n( torban ) haddhaa durriyyoota mootummaa kana dhandhaman maqaa isaanii akka armaan gadiitti isiniif dhiheeysina .
1. Abdulnaasir Ahmad Muhammad
2. Abdii Hasan Suufiyaan
3. Ali Amiin Abdullaahii
4. Muktaar Muhammad Bakar
5. Baarree Ahmad Yuuyyoo
6. Alii Muhammad Abdii
7. Idriis Aadam akka tahan maddeen nuuf gabaasaniiru.
Gocha seera-dhabeessa kana irratti adda durummaan kan itti hirmaataa turan keeysaa Poolisa Magaalaa Kombolchaa kan tahaniif mallaqa kafaluu fi milishoota qindeeysuu irratti kan shora guddaa taphaachaa ture Obboo Ahmad Sa’id Ibraahim fi Qaamota milishootaa keeysaa ammoo Obboo Sulee Ahmad Muusaa fi Obboo Qaasim Yuusuf yimar kan jedhaman akka tahan maddeen keenya wol qabsiisuudhaan nuuf gabaasaniiru.
Rabbiin guddinnuma isaatiin sheeka keenya guddaa darasoota isaanii 300 wojjiin yeroo dhihoo keeysatti wolitti nuuf haa deebisu.
Qaamota Islaamummaa dhabamsiisuuf socho’an hundaa Rabbiin nurraa haa buqqisu .
Rabbiin Injifannoo kan Hawaasa Baldhaa haa godhu!!!
Yaa Qeero Haraari Maaluma eegdaa ???
Ka’aa dammaqaa Amantii keeysaniif dhaabadhaa !!